Thwebula AOMEI OneKey Recovery 1.6.1 – Vessoft
Thwebula AOMEI OneKey Recovery
Isigaba: Isipele nokubuyisela
Ikhasi elisemthethweni: AOMEI OneKey Recovery
AOMEI OneKey yokutakula – isofthiwe ubuyisele uhlelo ku ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa. Isofthiwe isekela nokutakula isistimu lekhompyutha izilungiselelo zasembonini. AOMEI OneKey yokutakula baxhumana abakhiqizi ezahlukene amakhompyutha ephathekayo futhi kungaba ukubuyisela uhlelo engaphelele kweyisipele adalwe ngokucindezela ukhiye oyedwa ngesikhathi ebhuthini system. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukusekela ngokulondoloza kohlelo ezimeni ngokuzenzekelayo noma mathupha, khetha kudingekile kokucindezelwa Izinga ke bese ugcine kungxenye ezifanele a idrayivu kanzima. AOMEI OneKey yokutakula uyakwazi ukubuyisela uhlelo kukhompyutha yakho ngaphandle kokusebenzisa oqalisekayo CD, i-DVD noma i-USB zenethiwekhi.
Imodi Ukusekela ngokulondoloza okuzenzakalayo
Ukufaka we ezidingekayo isipele kokucindezelwa ezingeni
kutholwe isistimu kuzilungiselelo ifektri
Ukuxhumana ne-computer abantu ngabanye laptop kusuka abakhiqizi ezahlukene
kutholwe isistimu ngaphandle kokusebenzisa abezindaba oqalisekayo
Amazwana ku AOMEI OneKey Recovery
AOMEI OneKey Recovery software ehlobene
Burn CD & DVD
Ithuluzi ukusebenza nge akwazi of ngetakhiwo letehlukene. Isofthiwe isekela isipele kanye nokuvulwa idatha elahlekile.
Izithombe ze-CD ne-DVD
Ithuluzi elinamandla ukusebenza nge izithombe disk. Isofthiwe ikuvumela ukuba adale izindilinga eziyizicaba oqalisekayo futhi flash oshayelayo ukufaka uhlelo lokusebenza.
Le software ishukumisa ama-disk angempela futhi idala amafayela wesithombe amafomethi ahlukene. Isofthiwe yenza ama-disk amaningana ama-virtual ngesikhathi esisodwa.
I Umbuso indawo ukuze alulame amafayela kusulwe kukhompyutha yakho bese abathwali ehlukahlukene idatha. Futhi kukhona umsebenzi alulame idatha kwi oshayelayo ezilimele noma kwatiswa.
Isofthiwe ukuze alulame idatha nezinhlobo ezahlukene. Isofthiwe uyakwazi alulame amafayela elahlekile noma ayitholakali kusukela kumadivayisi ezahlukene kanye nedatha ezithwala.
Ithuluzi isipele futhi alulame idatha uhlelo. Isofthiwe kwenza ukwakha ikhophi hard drive futhi ukudlulisa idatha kwi othwala kwenye idatha.
Ithuluzi alulame amafayela kusulwe noma ezilahlekile. Isofthiwe usebenta nelicembu ifayela izinhlelo ethandwa futhi uyalulama amafayela kuma ulwazi ezahlukene yezinkampani.
An-okulula ukusetshenziswa software ukuze alulame idatha ezinhlobo ezahlukene kukhompyutha yakho bese abathwali ehlukahlukene idatha. Isofthiwe isekela hard drive, kanye izinhlelo ifayela wezinhlobo ezihlukahlukene.
Le software iklanyelwe ukulondoloza idatha kusuka emithonjeni yangaphakathi noma yangaphandle ngokusebenzisa izindlela ezahlukene bese ukhetha izinga lokucindezela le-backup.
GoodSync 10.9.2.2 Standard futhi Portable
Ukuphathwa kwefayela, Isipele nokubuyisela
Isofthiwe ukuvumelanisa idatha phakathi kwekhompyutha yakho kanye namanye amadivayisi. Futhi isekela kwideskithophu kumaseva ezahlukene.
Hetman Partition Recovery 2.8 Standard...
I elula kusho ukubuyisela amafayela ngephutha isuswe noma ezilahlekile. Isofthiwe isekela spectrum ebanzi ezahlukene izingxenye system for the alulame idatha.
Isofthiwe ubuyisele idatha uma kwenzeka isimo ezingalindelekile. Isofthiwe uyakwazi ukusekela ngokulondoloza kohlelo ne izilungiselelo zamanje.
Ukucindezelwa kwamafayela, Izithombe ze-CD ne-DVD
Isofthiwe ukwakha disk virtual kusukela izithombe ezahlukene amafayela. Isici esiyinhloko isofthiwe iyona wekhasi of ezinqolobaneni esihlinzeka emsebenzini amafayela ngaphandle isidingo ukususwa kwabo.
Isofthiwe sokulingisa umsebenzi mouse and keyboard usebenzisa joysticks udlala. Isofthiwe isekela ukucushwa kwe inhlanganiselazihlonzi of the ikhibhodi noma igundane futhi inikeza ukulingisa zabo osheshayo on the induku yokudlala.
Isofthiwe ukuqoqa ulwazi mayelana video ikhadi, processor, ihluzo ikhadi kanye nezinye izingxenye. Isofthiwe kwenza ukubuka futhi avivinye umthwalo phezu ihluzo iprosesa.